कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट भित्रिने डर- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट भित्रिने डर
आश्विन २, २०७८ अतुल मिश्र
काठमाडौँ — गत जुलाईदेखि हालसम्म संकलित कोभिड–१९ का ९९ नमुना सिक्वेन्सिङ गर्दा ९७ वटामा डेल्टा भेरिएन्ट पुष्टि भयो । दुई नमुनामा वाइल्ड टाइप (चीनको वुहानमा देखिएको) को कोभिड देखियो । सेप्टेम्बर १५ मा ४८ नमुनाको जिन सिक्वेन्सिङबाट ४६ वटामा डेल्टा र दुई वटामा वाइल्ड देखिएको थियो ।
नेपालमा डेल्टा प्लससहित ‘भेरिएन्ट अफ कन्सर्न’ का रूपमा अल्फा (बी.१.१.७) र डेल्टा (बी.१.६१७.२) भेरिएन्ट तथा भेरिएन्ट अफ इन्टरेस्टका रूपमा कप्पा भेरिएन्ट (बी.१.६१७.१) पुष्टि भइसकेको छ । साउथ अफ्रिकन, ब्राजिलियन, कोलम्बियामा पाइएको नयाँ भेरिएन्ट भने नेपालमा पाइएको छैन । तर, मुलुकभित्रै नयाँ भेरिएन्ट विकसित हुन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेल बताउँछन् । सीमानाकामा भइरहेको लापरबाहीले नयाँ भेरिएन्ट भित्रिने डर बाँकी नै रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
उनीहरूले छिमेकी मुलुक वा नयाँ भेरिएन्टको उद्गम मुलुकबाट आउनेमाथि निरन्तर कडा निगरानी गर्न सुझावसमेत दिए । विमानस्थललगायत विभिन्न प्रवेश बिन्दुवाट भित्रने व्यक्तिलाई हेल्थ डेस्क राखिने र तिनको एन्टिजेन परीक्षणलाई प्राथमिकतासाथ जिनोमिक सिक्वेन्सिङ गरी हेर्ने तयारी थालिएको डा. पौडेलले बताए । ‘तत्काल डेल्टा र डेल्टा प्लसबाहेक अन्य भेरिएन्ट नथपिए पनि प्रवेश बिन्दुबाट त्यो खतरा छ,’ उनले भने ।
ग्लोबल इनिसिएटिभ अन सेयरिङ अल इन्फ्लुएन्जा डेटा (जीआईएसएआईडी) का अनुसार नेपालले हालसम्म २ सय ३२ नमुनाको सिक्वेन्सिङ गर्दा १ सय ९७ वटा विभिन्न भेरिएन्ट र ३३ वटा वाइल्ड टाइपको कोभिड देखिएको छ । भेरिएन्टमध्ये १ सय ८४ वटामा डेल्टा, ११ मा अल्फा र २ नमुनामा कप्पा भेरिएन्ट पाइएको हो । ‘हालसम्म २ सय ३२ नमुनाको जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा ८५ प्रतिशतमा भेरिएन्ट र १५ प्रतिशतमा वाइल्ड टाइपको कोभिड देखिएको छ,’ भाइरोलोजिस्ट एवं प्रदेश–२ जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डा. श्रवणकुमार मिश्रले भने ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले जनवरीतिर कोलम्बियामा पाइएको ‘बी.१.६२१’ भेरिएन्टलाई पछिल्लो समय ग्रिक वर्णमालाका आधारमा ‘म्यु’ नाम दिएको छ । यसलाई ‘भेरिएन्ट अफ इन्टरेस्ट’ का सूचीमा समेत सामेल गरिएको छ । यो भेरिएन्टको म्युटेसन (जिनसम्बन्धी परिवर्तन) ले कोभिडविरुद्घको खोपको असर कम गर्न सक्ने डब्लूएचओले जनाएको छ । ‘शरीरमा भाइरसविरुद्घ बनेको इम्युनिटी (प्रतिरोधक क्षमता) लाई यो भेरिएन्टले छल्न सक्छ,’ डा. मिश्रले भने, ‘दक्षिण अफ्रिकामा पाइएको ‘सी.१.२’ ले पनि इम्युनिटीलाई छलेको पाइएको छ ।’ यसखालका भेरिएन्टले खोपको प्रभावकारितालाई समेत जित्ने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुना झाले नयाँ भेरिएन्ट भित्रन नदिन सीमामा कडाइका साथ सतर्कता अपनाउनुपर्ने बताइन् । ‘बोर्डर र नाकाबाट मुलुक भित्रिनेहरूको निरन्तर कोभिड स्क्रिनिङ अत्यावश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘पछिल्ला दिनमा हामी सिक्वेन्सिङ बढाउने योजनामा छौं ।’ नेपालमा कोभिडको दोस्रो लहरका लागि डेल्टा भेरिएन्टलाई जिम्मेवार मानिएको छ । डब्लूएचओले यसैसाता जारी गरेको विवरणअनुसार हालसम्म १ सय ९३ मुलुकमा अल्फा भेरिएन्ट, १ सय ४२ मुलुकमा बिटा, ९६ मुलुकमा गामा र १ सय ८० मुलुकमा डेल्टा देखिएको छ । चारै भेरिएन्टलाई डब्लूएचओले भेरिएन्ट अफ कन्सर्नको सूचीमा राखेको छ । म्युलगायत इटा, आयोटा, कप्पा, ल्याम्ब्डा भेरिएन्ट अफ इन्टरेस्टको सूचीमा छन् ।
विभिन्न नमुनाको जिनोमिक सिक्वेन्सिङ गर्दा विश्वमै सबैभन्दा बढी डेल्टा भेरिएन्ट देखिएको छ । नेपालमा समेत अहिले करिब सबै नमुनामा डेल्टा देखिएको छ । जीआईएसएआईडीका अनुसार ३५ लाख ६७ हजार ९ सय ८ नमुनामा जिनोमिक सिक्वेन्सिङ गरिएको छ । यसअन्तर्गत ११ लाख ५१ हजार ४ सय ५७ नमुनामा डेल्टा देखिएको हो ।
प्रकाशित : आश्विन २, २०७८ ०६:२१
काठमाडौँ — चोरीका मोटरसाइकलसहित प्रहरीले ३ जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा सिन्धुपाल्चोक पाँचपोखरी थाङपालका विजय धिताल, मेलम्चीका जीतबहादुर तामाङ र विष्णु तामाङ पाख्रिन छन् ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाबाट सादा पोसाकमा खटिएको ट्राफिक प्रहरी टोलीले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–५ थलीबाट उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।
चोरी गरेर लगिरहेको अवस्थामा वाग्मती प्रदेश ०२–०१५ प ६१७२ नम्बरको मोटरसाइकलसहित धिताललाई पक्राउ गरेको हो । खोटाङ घरभई काँडाघारी बस्ने संजीव राईले बिहीबार आफ्नो मोटरसाइकल हराएको जानकारी दिएको थियो । धितालको अनुसन्धानको क्रममा भदौ १५ गते कोटेश्वरबाट हराएको मोटरसाइकलसहित जीतबहादुर र विष्णु पक्राउ परेको महाशाखा प्रमुख एसएसपी जनक भट्टराईले बताए ।
तारकेश्वर नगरपालिकाका सुमन धितालको प्रदेश ३–०२–००१ प ७२८६ नम्बरको उक्त मोटरसाइकलको नम्बर परिवर्तन गरी प्रदेश ३–०२–००७ प ८४९४ बनाई चलाउँदै गरेको अवस्थामा उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न तीनै जनालाई थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वर पठाइएको महाशाखाले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, महाशाखाले उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरुबाट हराएका २४ मोटरसाइकलहरू फेला पारी सम्बन्धित धनीलाई शुक्रबार जिम्मा लगाएको छ । हस्तान्तरण गरिएका २४ मध्ये २० वटा मोटरसाइकल र ४ वटा स्कुटर रहेका छन् । महाशाखाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा मोटरसाइकल हराएको भन्दै २ सय ४० वटा निवेदन परेको र १ सय २१ मोटरसाइकल खोजतलास गरी धनीलाई जिम्मा लगाइएको छ । चोरीमा संलग्न १५ जना पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया थालिएको छ । गत आव ०७७/७८ मा १ हजार ३ सय ५६ मोटरसाइकल चोरीको निवेदन परेको थियो । जसमध्ये ३ सय ९७ खोजतलास गरी धनीलाई जिम्मा लगाएको र मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न ५१ जनालाई कारबाही गरेको महाशाखाले जनाएको छ ।
प्रकाशित : आश्विन १, २०७८ २२:१३